ESI EDEGARA ỌRỤ NKWADO NA FACEBOOK - FACEBOOK - 2019
Ịmepụta nkwado na Facebook
Oge ezumike na ihe omume ndị ọzọ na - adịghị enwekarị ọnọdụ n'enweghị nkwado egwu. Iji mee ka ndị na-ege ntị nwee obi ụtọ ma mee ka ikuku nke omume ahụ kpọọ ọkachamara DJ nke na-emepụta ihe egwu egwu.
Ị nwekwara ike ịghọ DJ ma mee ka ìgwè mmadụ ahụ nwee obi ụtọ. Ọ dịghị mkpa ịzụta ngwá ọrụ dị oke ọnụ. Ezigbo kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ na usoro ihe omume UltraMixer - ihe ngwọta ọkachamara maka ịmepụta mixes na egwu na arụ ọrụ.
Ngwa a nwere ọtụtụ ọnụọgụ ma nwee interface interface enyi. N'ihe gbasara arụmọrụ, ọ gafere ihe omume ndị dị ka Virtual DJ na Mixxx. Ma maka ojiji zuru oke nke usoro ihe omume a, ọ dịkarịa ala nwetakịrị ahụmahụ n'ịrụ ọrụ na egwu bụ ihe na-achọsi ike.
Anyị na-akwado ịhụ: Mmemme ndị ọzọ maka ịkwanye egwu egwu
Ịmepụta egwu egwu
Tinye egwu kachasị amasị gị na usoro ihe omume ma tinye ha na playback. Site n'iji oge na-arụ ọrụ, ị nwere ike mee ka otu egwu na-aga nke ọma n'ime ọzọ.
Ọ bụrụ na ị nwere ahụmahụ zuru ezu, ị nwere ike ọbụna tinye otu egwu na onye ọzọ n'ụzọ dị mma. A na-eme nke a site n'iji ọrụ nke ịgbanwe agbanwe nke egwu ahụ. N'ihi ya, ịnwere ike ịgbanwe ụda nke otu abụ na onye ọzọ, ka ha wee dị ka otu egwu.
Na-arụ ọrụ na mmetụta egwu
Ị nwere ike itinye ọtụtụ ihe dị iche iche na egwu, dịka nlọghachi azu maọbụ ọmarịcha egwu DJ. Mee ka ndị na-ege ntị nwee ụda pụrụ iche!
Ị nwere ike idekọ arụmọrụ gị ma ọ bụ mee ka ụlọ ọrụ na-arụkọ ihe ọkụkụ na-enweghị ịhapụ ụlọ. Ihe niile a ga-ekwe omume n'ihi ọrụ ndekọ. UltraMixer na-enye gị ohere ịdekọ mix na MP3 ma ọ bụ WAV usoro.
Ihe omume ahụ dị nhazi. Na ya, ịnwere ike igbanwe ụda ụda nke egwu. Na mgbakwunye na nhazi nhazi ukwu, enwere ndị nhazi dị iche iche maka aka ekpe na nke ziri ezi.
Ebe ọ bụ na e mepụtara ngwa ahụ maka ọrụ ndụ, ọ na-enye gị ohere igosipụta egwu na-acha agba na ihuenyo jikọọ na kọmputa. Egwu agba bụ vidio na-egosi ụda na ụda nke egwu.
Igwe okwu igwe
Njirimara ọzọ nke UltraMixer na-ejikọ ma na-ebunye ụda site na igwe okwu. Ihe omume ahụ nwere bọtịnụ pụrụ iche nke na-eme ka egwu dị jụụ ka ị na-ekwu okwu. Ma ị nwere ike iji usoro ihe omume maka karaoke performances.
1. Ọtụtụ ohere iji mepụta mix egwú;
2. Ọdịdị dị mma.
1. Maka ndị ọrụ na-enweghị uche, usoro ihe omume ahụ nwere ike iyi mgbagwoju anya;
2. Enweghi ike ịtụgharị asụsụ Russian;
3. A kwụrụ ụgwọ a. Ụdị nnwere onwe a chọrọ ịmalitegharịa ọ bụla nkeji iri isii.
UltraMixer bụ usoro magburu onwe ya maka ịmepụta egwu egwu maka nnọkọ na ndekọ studio. A pụkwara iji ya jikọọ ọtụtụ songs na otu.
Download UltraMixer Trial
Mixxx Mmemme maka ijikọ egwu Traktor Pro 2 Esi edozi njehie na window.dll na-efu
UltraMixer bụ usoro dị elu nke ndị ọkachamara DJ na ndị ọrụ nkịtị bụ ndị na-achọ ịnwale egwu.
Onye Mmepụta: UltraMixer Digital Audio Solutions